Madaxweynahii Hore Sheikh Shariif maxaa uga Hirgalay Qorshahiisa magaalada Jowhar | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweynahii Hore Sheikh Shariif maxaa uga Hirgalay Qorshahiisa magaalada Jowhar
Madaxweynahii Hore Sheikh Shariif maxaa uga Hirgalay Qorshahiisa magaalada Jowhar
Madaxweynahii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed laba jeer buu isaga daba noqday Magaalada Jowhar ee Caasimada KMG ah ee Hirshabele. isaga oo xooga saarayey inuu si uun u furfuro Siyaasadi lagu abuurayey Maamul ay wataan Fahad iyo Farmaajo.
Hadaba Safarkiisi hore wax kama bedelin hanaanki wax ku socdeen oo waxaa soo baxay 3 masuul oo markii horeba la saadaalinayey oo la watay. Sidoo kale Haatan oo uu safarkiisii labaad ka soo noqday maxaa u hirgalay. Mise xaalku waxuu ku dhamaan doonaa sidii loo sii Qorsheeyay. Oo waxuu soo noqday fara marnaan.
Si kastaba ha ahaatee waxaa jira dareen Shaki Abuuraya oo dhinaca kale ah. Taas oo ah in Madaxweyne Shariif lagula taliyey in uu arintan ka gaabsado. Marba hadii Xildhibaanada wax dooranaya ay yihiin kuwii Muqdisho lagu diyaariyey. Aysana Suurtagal u aheyn inuu wax weyn oo isbedel ah ku sameyn karo.
Mudane Shariif Sheekh Axmed kama helin taageeradii uu ka filayey ninka ay is Xulufeysiga leeyihiin oo ah Madaxweynahii hore Xasan Sheekh
Previous articleWar deg deg ah Qarax lala Eegtay Gaariga wasiir katirsan Xukumada Rooble oo ka dhacay Muqdiaho
Next articleMadaxweynaha Koosafa oo Iscasilay si Maxkamad Caalami ah loo soo taago